Khulisa ukuguqulwa kokukhokha ngokuchofoza ngakunye
Ikhasimende lishicilela isikhangiso esikhokhelwayo esigqugquzela i- ngokushesha Esikhangisweni… ikholi idluliselwa esikhungweni sezingcingo lapho inani lesilinganiso lingahlinzekiwe. Eshu. Elinye iklayenti lizungezisa amagama angukhiye kaningi njengoba lingatholi ukuguqulwa. Eshu… ifomu lokuthenga lithumela ekhasini elingatholakali. Futhi elinye iklayenti lifaka i-CAPTCHA kwifomu yokukhiqiza ehamba phambili… engasebenzi nhlobo. Eshu.
Zonke lezi yizibonelo ezibiza izinkampani izinkulungwane zamaRandi kumabhajethi wokusesha akhokhelwayo. Akugcinanga lapho ngokuholela imali engenayo eqondile, babuye bakhungathekisa namathemba okungenzeka ukuthi ngeke aphinde abuye.
Lapho ukuthengiswa kwewebhusayithi noma ukuhola kungabonakali, izinkampani zivame ukukhomba zazo ukumaketha online izinhlelo njengomubi. Imikhankaso yakho eku-inthanethi ingathinta izinhloso zayo… kepha ihluleke ngenxa yokwenza kabi emhlane.
Nazi izinyathelo eziyishumi zokuwina ukuguqulwa ngosesho olukhokhelwayo
Qiniseka ukuthi une- analytics Isixazululo endaweni (bese usisebenzisa).
Nika amandla ukulandelwa kwemigomo (okwaziwa nangokuthi ukulandelwa kwe-ecommerce). Uma ulandela izinhloso kuphela, nikeza inani emgomweni ngamunye olandelwayo.
Cupha imigudu yokuguqula imigomo ngakunye kukalwe. Gada ukusebenza ngomthombo, umkhankaso, isikhangiso, igama elingukhiye, nanoma ibuphi obunye ubukhulu.
Ngaphakathi kwe-AdWords, Isikhungo Sezikhangiso, noma amanye ama-Akhawunti, qiniseka ukuthi ukulandela ngomkhondo ukuguqulwa ivuliwe futhi isebenza kahle.
Njalo hlaziya ukusebenza amamethrikhi, hhayi kuma-akhawunti akho kuphela
Linganisa ama-KPI angeziwe, kufaka phakathi ama-bounce rates, amakhasi aphakathi nendawo ngokuvakasha ngakunye nesikhathi esimaphakathi kusayithi entweni ngayinye yomkhankaso. Okuqukethwe okungalungile kusayithi lakho noma ekhasini lokufika kungathinta imikhankaso.
Hlola inqubo yokuphuma uqobo noma omunye umuntu enze njenge Imfihlo Shopper ukuthola ubunzima.
Hlola ikhono lakho loku qedela izenzo ezifiselekayo (ungagcwalisa ngempumelelo i-oda eliku-inthanethi noma ucele ikhathalogu / incwajana, njll.). Lokhu kunengqondo hhayi kuphela kusuka ku kuyasebenza ukuma, kepha kukusiza ekuboneni izingqinamba zomuzwa / zomsebenzisi ezingaba khona ezingalungiswa noma zithuthukiswe.
Uma isilinganiso sakho esiseduze sincike kumathemba ahambayo ngokusebenzisa i- uhlelo lokukhulisaisb. i-imeyili noma ifoni, hlaziya nalokhu. Futhi, akukhona ukuthi zingaki ezikuholelayo kodwa ukuthi wenzani ngazo.
Ungathola iziphetho eziyiphutha mayelana nokuthi ucabanga ukuthi imikhankaso yakho isebenza kabi kangakanani uma uhlola amasethi wedatha kuphela, yenza ukuhlola isayithi lakho inqubo.
Intengo yempumelelo ukuqapha okuphakade. Qiniseka ukuthi izinto ziyasebenza! Iwebhusayithi yakho iyingxenye yebhizinisi lakho, ayihlukile kuyo. Uma ukuhola isizukulwane kubalulekile, ungayeki ekulandeleni ivolumu yokuhola kwakho, kepha qapha imiphumela. Kwezinye izimo, lapho ukwenza ngcono kufiseleka / kudingekile, ukwenziwa kwakho ku-inthanethi kungaba yinkinga. Ungenzi ukucabanga.
Tags: isikhungo sezikhangisoi-adwordsimingcele yokuguqulwaukulandelwa kwe-ecommerceimigudu yokuguqula imigomoukulandelwa kwemigomokpisukuhola isizukulwaneivolumu yokuholaukuthuthukiswa kokumakethaukusesha okukhokhelweukwenza kahle useshoamamethrikhi wokusebenzappcama-akhawunti we-ppc
Indatshana enhle. "Landelela lokho ofuna ukuthuthukisa"
Mar 26, 2014 ku-11: 40 PM
Nayi ithiphu engiyisebenzisela i-biz yangakini ebizwa ngokuthi ukwahlukanisa usuku. silondoloze imali eningi kepha sihlela izikhangiso zethu ukuthi zivele ngezikhathi zokusebenza kuphela zosuku. Ngicabanga ukuthi kukhona umbiko (ngaphansi kwethebhu yobukhulu uma ngikhumbula kahle) okukuvumela ukuthi uhlaziye i-CPC nezindleko ngokuguqulwa ngakunye ngehora losuku ukuze ukwazi ukukhangisa ngezikhathi eziphakeme kakhulu. Empeleni saqala inqubo yokwandisa amabhidi ethu ngalezo zikhathi eziphakemeyo ukuxosha esincintisana nabo ngaleso sikhathi futhi sagcina sinciphisa izindleko zizonke ngokwenza lokhu futhi njengoba bekuhlosiwe kakhulu. Empeleni nginomngani wami uSimon aphathe i-akhawunti yethu ye-adwords, uma ufuna ukukhuluma naye vele umthumelele i-imeyili simon.b@resultsdriven.org noma 302-401-4478. Mtshele abangane bakho noDean Jackson.